thinzar's blog: Computer Science Final Year Project
ဘာလုပ်ချင်လဲ. ပြောလေ. ဘာလိုလဲ. ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲ…
ဟဲဟဲ. လေဖမ်းပြီး ဒန်းစီးကြည့်တာပါ.. ဘာမှတတ်ဖူး..ရွှီးတာတော့ရတယ်. မသဉ္ဇာရဲ့ Assignment ကို ဝင်ရွှီးဖို့ အကူအညီလိုရင်ပြော. Google တောင် ထိုင်ငိုသွားစေရမယ်..
23/3/07 3:44 PM
ဒီလိုပြောတာနဲ့တင် ပရောဂျက်အတွက် စိတ်ချသွားပြီ။ ဟိဟိ.. မုန့်ဝယ်ကျွေးရမယ်။ ဘာစားချင်လဲ။
23/3/07 4:30 PM
မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေတော့ မဖြစ်နိုင်တာ 100% သေချာတယ်...
28/3/07 5:43 PM
အင်း.. မြန်မာပြည်ကတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ အမှန်တော့ မြန်မာပြည်က လူတွေလည်း တော်တာဘဲ။ ဥပမာ စေတန်လိုပေါ့။ ဒီမှာက ကျောင်းသားတွေကို လိုအပ်တဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲ ဆော့ဖ်ဝဲ အစုံပေးထားတော့ သူတို့ အဲဒါတွေကို လုပ်နိုင်တာပေါ့။